चिसो मौसम सुरु भएसँगै पूरै गाउँ कोरोना संक्रमित, एक जना मात्रै सुरक्षित ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रिय समाजचिसो मौसम सुरु भएसँगै पूरै गाउँ कोरोना संक्रमित, एक जना मात्रै सुरक्षित !
काठमाडौं। चिसो मौसम सुरु भएसँगै कोरोनाभाइरसको संक्रमण तीब्र भएको छ । संक्रमणको प्रसारको गति पनि बढेको छ । विश्व्भर ५ करोड ७८ लाख भन्दा धेरै मानिसहरु संक्रमित भइसकेका छन् । छिमेकी देश भारतको हिमाचल प्रदेशको एउटा गाउँमा भने संक्रमणको अत्यन्तै अनौठो स्थििति देखिएको छ । हिमाचल प्रदेशको लाहौल स्पिती जिल्लाको यो गाउँका सबै संक्रमित भएका छन् तर एक जना मात्रै सुरक्षित रहन सफल भएका छन् ।इण्डियन एक्सप्रेसको रिपोर्टअनुसार सुरक्षित रहन सफल यी व्यक्तिको परिवारका बाँकी सदस्य पनि सबै संक्रमित भएका छन् ।
लाहौल स्पितीको थारंग गाउँमा कूल ४२ जनामध्ये यी एक व्यक्तिबाहेक बाँकी ४१ जना सबै संक्रमित भएका छन् । सुरक्षित रहने एक्ला व्यक्तिको नाम भूषण ठाकुर हो र उनी ५२ वर्षका छन् । रिपोर्टअनुसार भूषण संक्रमणबाट बच्नको लागि सबै नियमको पालना गर्छन् ।जिल्लाका चीफ मेडिकल अफिसर डा. पलजोरले सम्भवतः भूषणको रोग प्रतिरोधी शक्ति निकै बलियो भएको हुन सक्ने बताए । गाउँका सबै संक्रमित हुँदा भूषण एक्लै सुरक्षित हुनु आश्चर्यको कुरा भएको उनले बताए । यो गाउँमा ५ जना सबैभन्दा पहिले पोजेटिभ पाइएका थिए ।
त्यसपछि बाँकी सबैले बैठक गरेर ४ दिन पहिले स्वेच्छाले परीक्षण गराएका थिए । परीक्षणमा सबै पोजेटिभ पाइए ।थोरंग गाउँका कूल ४२ निवासीमध्ये ४१ जना पोजेटिभ छन् । खासमा यो गाउँमा १०० जना बस्छन् तर हिउँ पर्न थालेपछि पछिल्लो समय यहाँका आधाभन्दा धेरै बासिन्दा कुल्लु गएका छन् । रिपोर्टका अनुसार भूषण ठाकुर घरको छुट्टै कोठामा बस्छन् । खाना आफैं बनाउँछन् । परिवारको साथमा उनले ४ दिन पहिले स्वाब दिएका थिए । रिपोर्टमा भूषणबाहेक सबै पोजेटिभ पाइए । भूषणका अनुसार उनले सुरुदेखि नै नियमित मास्क लगाउने, हात धुने, सेनिटाइज गर्ने र सामाजिक दूरीमा ध्यान दिइरहेका छन् ।